Allgedo.com » Faalo: Dastuurka Qabyo Qoraalka Soomaaliya ee lagu wado in Bisha Juun ee sanadkaan dhexdeeda la ansixiyo.
Home » Faallo, News » Faalo: Dastuurka Qabyo Qoraalka Soomaaliya ee lagu wado in Bisha Juun ee sanadkaan dhexdeeda la ansixiyo. Print here| By: allgedo.com:
Monday, June 4, 2012 //
6 Jawaabood Soo jeedin Guud ahaan Dastuurka:
Soo jeedin: (Waa in lagu daro Qodobkaan “Marka laga reebo wixii shareecada Islaamku kala dheeraysiisay” Sababta oo ah waxyaabo badan ayey ku kala duwan yihiin Labka iyo Dheddigu Shareecada Islaamka dhexdeeda xuquuq iyo waajibaadba, sidaas waxaa la mid ah Muslimiinta iyo Gaalada.)
1. Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu ra’yigiisa soo bandhigo iyo in uu qaab kasta u gudbiyo warka iyo afkaarta uu qabo, haddii aysan wax u dhimayn anshaxa bulshada iyo ammaanka dadweynaha.
3. Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu muujiyo hal’abuurkiisa faneed.
Soo jeedin:Halagu daro “haddii uusan ahayn dembi ka soo horjeeda Diinta Islaamka iyo banii’aadaminnimada”. Sababta oo ah dadka Soomaaliyeed waa Muslimiin dhammaan Nusuusta shareecada Islaamkuna waa ku fuleysaa markasta, in Nas kale oo ka weeciya la helo mooyee.
Soo jeedin:(Halagu daro “si waafaqsan shareecada islaamka iyo Dastuurka Dalka). Sababta oo ah waxaa jira jagooyin badan oo Haweenku aysan qaban Karin. Loona baahan yahay in qodobkasta oo Dastuurka ka mid ahi shareecada waafaqo.
Afhayeenka iyo ku-xigeenada Golaha Wakiillada Dawlad-Goboleedyada.
Soo jeedin:Si dhammaan xubnaha sarsare ee Dowlada Federaalka Jamhuuriyadu maqaab iyo maamuus mideysan u yeeshaan waa in “Afhayeenka iyo ku Xigeenada Golaha wakiilada Dowlad-Goboleedyada loo shardiyo in ay ka tanaasulaan hadii ay leeyihiin ama haystaan jinsiyad Dal ama Dalal kale inta aysan xilka la wareegin caddeynna usoo gudbiyaan Guddiga Doorashooyinka iyo Diiwaan galinta Xisbiyada” sida loogu shardiyey madaxweynaha, Ra’iisal Wasaaraha iyo ku xigeenkiisaba.
Shuruudaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka.
Ra’iisul wasaaraha wuxuu magacaabayaa Ra’iisul Wasaare ku-xigeen , wasiirro, wasiirro Dawlayaal iyo wasiirro ku-xigeen oo tiradoodu aysan ka badnaan karin laba iyo labaatan (22).
Qofka qabanaaya xilka Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Qodobka 130aad: Awoodda Garsoorka jamhuuriyadda.
Hadii Qof Madax ah, Siyaasi ah, Xildhibaan ah ama qeybaha kale ee Dowlada qeyb ka mid ah uu jabiyo Qodobada Dastuurkan ee lagu heshiiyey marka la xukumaayo waxa lagu xukumaayo ma ahan Qodobada Dastuurka ee uu jabiyey ee waxaa lagu Xukumaayaa waa Nusuusta shareecada Islaamka. Sababta oo ah wuxuu jabiyey heshiis ay dad Muslimiin ah isku raaceen, qofkii heshiiskaas jabiyana wuxuu leeyahay xukun sharci Diini ah. Taasina waxay waajibinaysaa in dhammaan Qaadiyaasha Maxkamadaha dalku noqdaan kuwo aqoon dheeraad ah oo ku filan u leh Fiqiga iyo dhammmaan qeybaha Shareecada islaamka.
SOSCENSA Legal Adviser
Faalo: Dastuurka Qabyo Qoraalka Soomaaliya ee lagu wado in Bisha Juun ee sanadkaan dhexdeeda la ansixiyo. " Saciid Birmad says:	June 4, 2012 at 3:50 am	Masha Allah. dhammaan maamulka Allgedo.com aad baan idiinku mahadcelinyaa waxaad tihiin Website-kii ugu horeeyey ee soo galiyaa qoraalkeygii.
abdul says:	June 4, 2012 at 8:04 am	Walaal haweenka iyo raga dastuurka way u siman yihiin iyo jaanisyada dalka yaal taas macnaheedu ma ahan 100 ley ayay noqoneysaa ee sharciga ayaa u siman yihiin weeye ujeedku………. waa qeyb dhan oo bulshadeena ka mid ah oo udub dhexeed u ah waliba hadaan anaga ayuraarayno waa ayaan daro…..
waa hooyadaa, waa walaashaa, waa xaaskaad u hoyatid, waa ina adeertaa, waa eedadaa , waa habaryartaa, waa ayeydaa, waa sodohdaaa, waa dumaashidaa , waa gabadhaada , intaas oo dhan hadaad xaqirtid oo noloshaada wax ku leh ma cadaalad baa walaal quraanka sidaa ma oran ee ka fiirso …..xaqiiqdi diinta waxay qabtaa haweenayda in ay ninkeeda ay ruqso waydiisato hadii uu siiyana xaq ayay u leedahay in ay ama ganacsato ama xil qaado ……… teeda kale gabadha aad jaamacada iskala baxdaan waxay xaq u leedahay waxay wax u soo baratey oo dalkeeda ah in ay jaanis kaad keheshid mid lamid ah ay ka hesho marka ka fiirsho wax yaalaha qaarkood maadaama aad sharci yaqaan tahay ma loo baaah-na ugu danbeyntii
waxaa iga xasuusin ah in dumarkeena somaaliyeed ay dhibti ugu badneyd iyaga ku dhacday inti dagaalada sokeeye sodeen waana ayaga cida badbaadisay qoysaskeena marka marki layiraahdo dalka dawlad halooo sameeyo in ayaga lagu tunto xaq uma laha…..
cumar jamac calijiir says:	June 4, 2012 at 9:14 am	waa arkay qoraalkaaga waadna ku mahadsantahay waana soo dhawaynayaa fakarkaaga, laakiin ku dhar soo jeedinta Garsoorka
iyo qaali yaasha in ay noqdaan rag muslin ah oo qura ,sida jagada madaxweynaha iyo Raysalwasaaraha iyo Afhayeenka baarlamaanka.
Lixle lion love says:	June 5, 2012 at 12:35 am	First waxa mahad celin leh webt site allgedo.com kadib dastur waki ilahay dastur kalena majir e ale inta kabaqdan waxan aad dho dhobaysan inta naga daysan dastur nagu filan waligen wan haysana e marabno marabno marabno wana kaso horjedna waxan ay rer galbedku sodho dhoben we do’nt went sharif iyo gaas hala labten mana donay no
Saciid Birmad says:	June 5, 2012 at 1:29 am	Masha Allah. Dhammaan aad baan idiinku mahadcelinayaa Faalada wanaagsan ee aad ka bixiseen qoraalkeyga. Walaalkey Abdul: Waxaan u maleynayaa sida aan wax u qaray ayaadan fahmin miyaa mise duulaan kale baad ku jirtaa. Haweenka ma xaqirin Alle ayaana ka magan galayaa inaan Hooyada, Walaashay, Eedaday, Habaryartay ama Ooridayda Xaqiro. Marka walaale waxaan ka hadlaayo waa Mas’alo Diini ah Nusuus badan oo Shareecada Islaamkuna xustay oo ah Dowlad Muslim ah in aanay Qof Haween ahi Madaxweyne ama Ra’iisal wasaare ka noqon karin. Laakiin intaas wixii kasoo haray oo Jago ah dhammaan cid Haweenka ka hortaagan ma jirto. Marka saas wax u fahan waxa aan ka hadlaayana ma ahan ra’yigayga ee waa Mas’alo sharci Diini ah. Marka walaale hadii aad Mas’aladaas hadal ka qabto hala iga qanciyo dheh. Waa qancinaynaa si Diin ah oo Nusuustii oo dhan baan ku siinaynaa. Walaalkeyga Cumar jaamac Calijiir. Mas’alada ah dumarku ma noqon karaan qaali mise maya waa Mas’alo khilfaai ah Madaahibta dhexdooda oo culumo waaweyn oo aan la fududeysan karin baa qabta in ruuxa Haweenka ahi qaali noqon karo. Arrintaas darteeda ayaan uga gaabsaday oo aanan uga hadlin mas’aladaas. Inkasta oo aan Anigu shaksi ahaan ku qanacsanahay in aysan ruuxa Haweenka ahi qaali noqon karin. Mahadsanidiin dhammaan.
Ali says:	June 5, 2012 at 2:47 am	Dasuurka waa in aqoon iyo ilbaxnimo lagu saleeyaa, hadii diin lagu saleeynaayo Al-shabaab baa xaq u leh ee ha loo dhiibo.